Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.4.3 Farsamo
Tijaabo lagu cabbiro waxa dhacay. Farsamo sharax sababta iyo sida ay u dhacday.
Fikradda saddexaad ee muhiimka ah ee ka gudubta wixii ka baxsan tijaabada sahlan ayaa ah qaababka . Mashquulisyada ayaa noo sheegaya sababta ama sida daaweynta ay saameyn ku yeelatay. Nidaamka raadinta hababka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa raadinta isbeddelada isdhexgalka ama dhexdhexaadinta doorsoomayaasha . Inkasta oo tijaabooyinku ay ku fiicanyihiin qiyaasaha saameynta keena, badanaa looma qorshayn inay muujiyaan hababka. Daraasad tijaabo ah ayaa naga caawin kara inaan qeexno hababka laba siyaabood: (1) waxay naga caawinayaan inaan ururinno xog dheeri ah iyo (2) ay nagu caawiyaan inaan tijaabino daweyno badan oo la xiriira.
Sababtoo ah farsamoyinka ayaa si fudud u qeexaya si rasmi ah (Hedström and Ylikoski 2010) , waxaan ku bilaabi doonaa tusaaleyaal fudud: qashin iyo nabaro (Gerber and Green 2012) . Qarnigii siddeedaad, dhakhaatiirtu waxay dareemeen dareen wanaagsan oo ah marka badmaaxayaashu ay cuneen xayawaan, ma aysan helin nabarro. Scurvy waa xanuun aad u daran, sidaas darteed tani waxay ahayd macluumaad xoogan. Laakiin dhakhaatiirtaas ma aysan ogeyn sababta ay udub-dhexaadku u diidey in uu kufsado. Waxay ahayd ilaa 1932, ku dhowaad 200 sano kadib, aqoonyahaniintu waxay si kalsooni leh u muujin karaan in fitamiin C ay sabab u tahay lime ka hortagay murqaha (Carpenter 1988, 191) . Xaaladdan oo kale, fitamiin C waa farsamo iyada oo limes-ka ka hortagaya nabarro (sawir 4.10). Dabcan, aqoonsashada nidaamku sidoo kale waa mid aad u muhiim ah oo saynis ahaan-badan oo sayniska ah ayaa ku saabsan fahamka sababta waxyaalaha dhacaya. Aqoonsiga hababka sidoo kale waa ficil muhiim ah. Mar haddii aan fahamsanahay sababta daaweyntu u shaqeyso, waxaa suurtogal ah in aan horumarino daaweyn cusub oo ka shaqeeya xitaa ka sii fiican.
Jaantuska 4.10: Noocyo ayaa ka hortagaya nabarada iyo qaabka uu yahay fitamiin C
Nasiib darro, kala soocida qaababka waa mid aad u adag. Si ka duwan qashinka iyo xajmiga, meelo badan oo bulshadeed, daaweyntu waxay u badan tahay inay ka shaqeeyaan wadooyin badan oo isku xidhan. Si kastaba ha noqotee, marka la eego xeerarka bulsheed iyo isticmaalka tamarta, cilmi-baarayaashu waxay isku dayeen inay joojiyaan hababka iyagoo ururinaya xogta habka iyo daaweynta la xidhiidha.
Hal hab oo lagu tijaabiyo hababka suurtagalka ah waxaa weeye iyada oo la ururiyo macluumaadka habraaca ee ku saabsan sida daaweynta ay u saameysay qaababka suurtogalka ah. Tusaale ahaan, xusuusnow in Allcott (2011) muujisay in Warbixinnada Tamarta ee Guriga ay sababeen dadka inay hoos u dhigaan isticmaalka korantada. Laakiin sidee ayay warbixinnadani hoos ugu dhacday isticmaalka korontada? Waa maxay qaababka? Daraasad dabagal ah, Allcott and Rogers (2014) waxay wada shaqeeyeen shirkad tamarta ah, iyada oo loo marayo barnaamij dib-u-celin ah, waxay heleen macluumaad ku saabsan macaamiisha u cusbooneysiiyay qalabka ay u isticmaalaan qaabab tamar oo tamarta ah. Allcott and Rogers (2014) ogaadeen in tiro yar oo ka mid ah dadka qaata Home Energy Reports ay kor u qaadeen qalabkooda. Hase yeeshee, farqigaas ayaa aad u yaryahay oo ay ku xisaabtami karto oo keliya 2% hoos u dhaca isticmaalka tamarta ee qoysaska la daweeyay. Si kale haddii loo dhigo, kor u qaadida qalabka ma aheyn habka ugu weyn ee loo adeegsanayo Qorshaha Guriga (Home Energy) wuxuu hoos u dhacay isticmaalka korontada.
Habka labaad ee hababka wax loo baran karo waa in lagu tijaabiyo tijaabooyinka leh qaabab yar oo daaweyn ah. Tusaale ahaan, tijaabooyinka Schultz et al. (2007) iyo dhammaan tijaabooyinka Natiijooyinka Shirkadaha Shidaalka ee soo socda, kaqeybgalayaasha waxaa la siiyay daaweyn labo qeybood oo muhiim ah oo ku saabsan keydinta tamarta iyo (2) macluumaadka ku saabsan isticmaalka tamarta marka loo eego asxaabtooda (jaantuska 4.6). Sidaa awgeed, waxaa macquul ah in talooyinka tamarta lagu badbaadiyo ay sababaan isbedelka, ma aha macluumaadka asaaga ah. Si loo qiimeeyo suurtagalnimada in talooyinka keligood laga yaabo inay noqdaan kuwo ku filan, Ferraro, Miranda, and Price (2011) waxay iskaashi la sameeyeen shirkadda biyaha ee u dhow Atlanta, Georgia, waxayna tijaabisay tijaabo la xidhiidha ilaalinta biyaha oo ku saabsan 100,000 oo qoys. Waxaa jiray afar xaaladood:
koox ka heshay talooyin ku saabsan kaydka biyaha
koox ka heshay talooyin ku saabsan kaydinta biyaha iyo rafcaan anshaxeed si loo badbaadiyo biyaha
koox ay heshay talooyin ku saabsan kaydinta biyaha iyo rafcaan anshaxeed si ay u badbaadiyaan biyaha iyo macluumaadka ku saabsan isticmaalka biyaha iyaga oo u eegaya asxaabtooda
koox ah kantarool
Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in daaweynta talobixinta kaliya ay saameyn ku yeelanayso isticmaalka biyaha ee gaaban (hal sano), dhexdhexaad (laba sano), iyo mudo dheer (saddex sano). Talooyinka iyo daaweynta rafcaanka waxay sababeen ka-qayb-galayaashu inay yareeyaan isticmaalka biyaha, laakiin kaliya muddada gaaban. Ugu dambeyntii, talooyinka iyo rafcaanka iyo daaweynta macluumaadka udubdhexaadka ah waxay sababtay isticmaalka hoos u dhaca gaaban, dhexdhexaad ah iyo muddada dheer (Jaantuska 4.11). Noocyada noocyada tijaabada ah ee daaweynta aan la isku kalsoonayn waa hab fiican oo lagu ogaan karo qeybta daaweynta - ama qaybaha ay wadaagaan - kuwaas oo ah kuwa saameynaya saamaynta (Gerber and Green 2012, sec. 10.6) . Tusaale ahaan, tijaabada Ferraro iyo jaaliyadaha ayaa na tusaya in talooyinka biyaha lagu badbaadiyo oo keliya aysan ku filneyn in la yareeyo isticmaalka biyaha.
Jaantuska 4: Natiijooyinka ka yimid Ferraro, Miranda, and Price (2011) . Daaweynta waxaa la soo diray May 21, 2007, waxaana saameyntii la qiyaasay intii lagu jiray xagaaga 2007, 2008, iyo 2009. Iyadoo la joojiyay daaweynta, cilmi-baarayaashu waxay rajeynayeen in ay yeeshaan dareen ka wanaagsan qaababka. Daaweyntii talo-bixinta keliya ayaa saameyn ku yeelatay muddada gaaban (hal sano), dhexdhexaad ah (laba sano), iyo mudo dheer (saddex sano). Talooyinka iyo daaweynta rafcaanka waxay ka qaybqaatayaasha ka dhigeen in ay yareeyaan isticmaalka biyaha, laakiin kaliya muddada gaaban. Talada iyo rafcaanka iyo daaweynta macluumaadka ilaysiinta ayaa ka dhigey ka-qaybgalayaashu in ay yareeyaan isticmaalka biyaha ee gaaban, dhexdhexaad ah iyo muddada dheer. Baararka cirifka ayaa lagu qiyaasaa kalsoonida kalsoonida. Fiiri Bernedo, Ferraro, and Price (2014) qalabka waxbarasho ee dhabta ah. Laga soo bilaabo Ferraro, Miranda, and Price (2011) , miiska 1.
Fikrad ahaan, mid ayaa ka sii gudbi doona qayb ka mid ah qodobbada (talooyin, talooyin iyo rafcaan, talooyin iyo rafcaan iyo akhbaarta asaagga) si ay u noqdaan naqshad farsameed oo buuxa -waxaa mararka qaarkood loo yaqaan \_(2^k\_) Saddexda qodob ayaa la tijaabiyaa (Jaantus 4.1). Iyada oo lagu tijaabinayo isku-dhafan kasta ee suurtogalka ah, cilmi-baarayaashu waxay si buuxda u qiimeyn karaan saamaynta qayb kasta oo ka mid ah go'doominta iyo isku-darka. Tusaale ahaan, tijaabada Ferraro iyo asxaabtu ma muujinayaan in isbarbardhigga isbarbardhigga ee keliya uu ku filnaan lahaa in uu keeno isbedel muddo dheer ah ee dabeecadaha. Waqtigii hore, naqshadahan tamarta ah ee buuxa way adagtahay in la ordo sababtoo ah waxay u baahan yihiin tiro badan oo ka-qaybgalayaasha ah waxayna u baahan yihiin inay cilmi-baarayaashu awood u yeeshaan inay si buuxda u kontoroolaan oo ay u soo gudbiyaan tiro badan oo daaweyn ah. Hase yeeshee, xaaladaha qaarkood, da 'da' da'da ah ayaa ka saaraya caqabadahaas taariikhiga ah.
Shaxda 4.1: Tusaalaha Daaweynta ee Naqshad Dhameystiran oo leh Qorsho Saddex ah: Talooyin, Racfaan, iyo Macluumaad Dhaqan
4 Macluumaadka Peer
5 Talooyin + racfaan
6 Talooyin + Macluumaadka isqabaarka
7 Macluumaadka Racfaan + Macallin
8 Talooyin + Racfaan + Macluumaadka asalka ah
Soo koobid, qaababka-wadooyinka loo marayo daaweyntu waxay saameyn ku yeelanayaan - waxay yihiin kuwo aad u muhiim ah. Dhibaatooyinka da 'yarta ah ayaa ka caawin kara cilmi-baadhayaasha inay bartaan hababka (1) ururinta xogta habraaca (2) suurta gelinta naqshadaynta falanqaynta ee buuxa. Farsamooyinka ay soo jeediyeen hababkan soo socda ayaa si toos ah loogu tijaabin karaa tijaabooyinka si gaar ah loogu talagalay inay tijaabiyaan hababka (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) .
Guud ahaan, saddexdaas fikradood-ansax ah, ficil hufnaanta saameynta daaweynta, iyo hababka -waxay bixiyaan fikrado awood leh oo loogu talagalay sameynta iyo tarjumidda tijaabooyinka. Fikradahaas waxay caawiyaan in cilmi-baarayaashu ay ka gudbaan tijaabooyin sahlan oo sahlan oo ku saabsan waxa "shaqeynaya" inay tijaabiyaan tijaabooyin ay ku xiraan xiriirro aragti ah, oo muujinaya meesha iyo sababta daaweyntu u shaqeyso, iyo in xitaa laga yaabo inay caawiyaan cilmi-baarayaasha inay sameeyaan daaweyn waxtar leh. Iyadoo la tixgelinayo taariikhdan asaasiga ah ee ku saabsan tijaabooyinka, waxaan iminka u jeedaa sida aad dhab ahaan u sameyn kartid tijaabooyinkaaga.